Izeluleko Ezintsha ZikaDexter Ekubuyeni KweNdodana Yakhe Harrision - iHorror
Ikhaya Izindaba Zokuzijabulisa Ezesabekayo Izeluleko Ezintsha ZikaDexter Ekubuyeni KweNdodana Yakhe Harrision
Nokho, I-Dexter Imvuselelo isinikeze ukusikisela okuncane Usuku lukaBaba. Bathumela i-blip teaser emfushane kakhulu yokuthi kungaba yini uphawu olukhulu lokuthi indodana kaDexter uHarrison uzobuyela kwisizini entsha. Kungaba yizindaba ezimbi kakhulu kuDexter.
Ibhiphu emfushane yetiye lembula ukuqhuma komlilo, ngesithombe esingazelelwe sokuphonswa kukaDexter nendodana yakhe. Okubhalwe kuTwitter kuphinde kwaveza umyalezo obhalwe ukuthi, “Ufuna ukwazi imfihlo? Ubaba ubulala abantu ”Lokhu kusho ukuthi noma indodana uHarrison ilandela ezinyathelweni zikayise noma maningi amathuba okuthi isemfunweni kaDexter.
Kuyathakazelisa kakhulu futhi kunesikhala sokuthunyelwe kosuku lobaba okupholile. Kepha, sisho ukuthini isihogo? Yebo, ngalokho kuzodingeka silinde sibone.
UJadon Wells udlale uHarrison emuva ngesizini yokuqala. Lokho kungamfaka eminyakeni eyishumi nambili selokhu kwaphela lolu chungechunge. Kepha, ngubani owaziyo ukuthi ngabe umlingisi wokuqala ngabe usazolingiswa yini endimeni leyo.
Ngabe nina bacabangani mayelana nethayela Dexter? Sazise esigabeni sokuphawula.
Ufuna ukwazi imfihlo? Ubaba ubulala abantu. #Dexter pic.twitter.com/zdT5aqvmNI
- UDexter ku-Showtime (@SHO_Dexter) June 20, 2021
URL Stine's Fear Street ulinganisiwe R. Funda kabanzi lapha.